PressReader - Eyethu Baywatch: 2017-11-29 - Isuse um­sindo irenke ya­matek­isi aseM­pan­geni en­gakapheli
Isuse um­sindo irenke ya­matek­isi aseM­pan­geni en­gakapheli
UKUBAMBEZELEKA kok­wakhiwa kw­erenke ya­matek­isi aseM­pan­geni, ku-Lot 63 seku­dale ukukhat­hazeka ko­somab­hizin­isi ben­dawo kanye nabe­m­boni yezokuthutha.
Nge­sikhathi iphep­hand­aba li­ham­bele ku­len­dawo ebukeka iphithizela kuMaxwell Street, li­bin­gelelwe ngabashayeli ba­matek­isi, abebekhala ngokuthi uMasi­pala waseMh­lathuzeubukeka wehluleka ukufeza izethem­biso zawo.
Omunye wabashayeli ba­matek­isi uthi babenoku­jab­ula nge­sikhathi kuqala loluh­lelo loku­lungiswa kwalerenke, kodwa manje ase­bezithola se­behluleka ukubekezelela isimo abab­hekene naso.
‘Isiminyaminya es­i­dalekayo ku­len­dawo asikhat­hazi thina kuphela, kodwa sigcina sesikhat­haza na­banye abashayeli bez­i­moto abaseben­zisa lomg­waqo.
‘Sa­sithen­jiswe ukuthi loluh­lelo lu­zothatha izinyanga ezine ukuthi um­sebenzi wonke up­hele, kodwa kuze kube yi­manje sekuphele cishe izinyanga eziy­ishumi nam­bili.
Asikho isikhulu sak­wa­masi­pala es­esike sazohlangana nathi, sa­si­bikela mayelana nokuthi loluh­lelo selukusiphi isi­gaba, futhi luphela nini.
Lomg­waqo ongeminye ematasa kakhulu, kodwa ke ngo­musa wenkosi azik­abi khona izin­gozi ez­imbi kakhulu,’ kuqhuba lomshayeli wetek­isi okhat­hazek­ile.
Uku­vezile ukuthi bayawubonga um­sebenzi owen­ziwe umasi­pala wokun­weba irenke, iphinde ifakelwe ne­mipheme yokukhosela, kodwa okubakhal­isayo isikhathi esas­in­qun­yelwe lom­sebenzi, es­i­bukeka sesid­lulile.
Omunye wabaphathi kulerenke, ukhale ngense­lelo enkulu abab­hekene nayo, yen­dawo yoku­paka nge­sikhathi be­salin­dele uku­lay­isha abantu.
Lom­phathi unxuse iphep­hand­aba ukuba li­fike ku­len­dawo ngezikhathi za­sekuseni nan­tam­bama, okuy­izikhathi ez­i­matsa kakhulu, ukuze liz­i­bonele ubun­z­ima abab­hekene nabo.
Uphinde wac­haza nokuthi abanye babashayeli bez­i­moto ez­ize ez­i­tolo, bazithola ku­lukhuni ukuthi zi­pake en­daweni efanele, uma be­zothenga. Uthe njen­goba sekuy­isikhathi sama­holide kakhisim­imusi, uzok­wanda umthamo wez­i­moto ez­i­zomp­intshana ku­lomg­waqo, njen­goba ku­zobe kukhona nezi­vakashi ez­iqhamuka kwezinye izin­dawo.Okhu­lumela umasi­pala uMnuz. Vin­cent Ncalane unxuse aba­matek­isi na­banye abahlukumezek­ile ngalesi simo ukuba behlise umoya, babekezele, njen­goba am­ath­unzi es­ewukela.
Out­cry over taxi rank con­struc­tion de­lays
Yiy­ona le renke ya­matek­isi es­use um­sindo